Play QuickTime Video on iPad / iPhone / Android were were
1. QuickTime Atụmatụ
2. Play QuickTime on iPad / iPhone / Android
4. QT Ikwunye-na
5. QT Ntụgharị
7. Trailers Download
8. Nchọpụta nsogbu
Olee otú Play QuickTime Video on iPad / iPhone / Android
QuickTime bụ a ọkpụkpọ maka kọmputa na-egwu dị iche iche formats. E nweghị ndị na QuickTime maka iOS ma ọ bụ QuickTime maka Android. Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara igwu egwu flash video ma ọ bụ na-apụghị emeghe gị QuickTime Email na gị iPhone, iPad, ma ọ bụ Android, ị nwere ike ma na-a video ọkpụkpọ na ngwa na-akwado QuickTime video, ma ọ bụ tọghata QuickTime video ka a format na bụ dakọtara na gị ngwaọrụ.
Part 1: Sinụ a Video Player App na-akwado QuickTime Video
Nkebi nke 2: tọghata QuickTime Video ka a Format Ò Kwekọrọ n'Ozizi na ngwaọrụ gị
VLC bụ a na-ewu ewu ọkpụkpọ maka iche iche nke mgbasa ozi faịlụ akwado. Ị nwere ike iji ya dị ka a QuickTime maka iPad, QuickTime maka iPhone, ma ọ bụ QuickTime maka Android. Ọ nwere ike na-egwu ihe ọ video na ihe ọ bụla codecs dị ka DivX ma ọ bụ H.264, ma ọ bụ na usoro nke avi, MKV, mp4, WMV, na ndị ọzọ. Ọ dịghị spyware, ad, ma ọ bụ onye ọrụ nsuso, i nwere ike dị eche free iji ya.
N'ihi na iOS N'ihi Android
Dị ka a mma-ọgaranya Media Player, ị nwere ike zaghachi na KMPlayer na-egwu vidiyo na ọ bụla usoro, gụnyere DVD na Blu-ray ọdịnaya. Ọ ọbụna nwere ike igwu 3D videos na-atụgharị 2D video ka 3D. Dị nnọọ-a laternative ka QuickTime maka iPad, iPhone ma ọ bụ Android na-egwu gị playlist, video na music.
3. Wondershare ọkpụkpọ
Dị ka a elu dakọtara QuickTime ọkpụkpọ maka iPad, iPhone na Android, ọ nwere ike igwu n'etiti iOS na ọtụtụ ndị ọzọ na gam akporo ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla ọzọ codec. Ị nwere ike iji ya na-egwu video, ọdịyo na ọbụna DVD faịlụ na elu definition. Nke a ọkpụkpọ ike ikwu na ị ndị kasị ewu ewu na vidiyo si na video nkekọrịta saịtị dị ka YouTube, Vevo na Hulu, na-enye gị kacha ụzọ achọpụta ọkacha mmasị gị na fim.
The ngwa dị ukwuu n'ihi na gụgharia ọwa. Ị nwekwara ike iji ya na-egwu Obodo video faịlụ mgbe ebufe videos gị iPhone ma ọ bụ iPad site iTunes faịlụ nyefe. Ndị kasị akpali ihe na RockPlayer2 ike ka ị na-ekere òkè videos n'etiti dakọtara ngwaọrụ.
5. Air Playit
Ọ bụ ihe ọzọ na iOS QuickTime ọkpụkpọ dakọtara na iPad, iPhone na iPod aka. Ọ na-ahapụ gị nweta ihe ọ bụla fim ma ọ bụ music ịchekwa na gị iOS ngwaọrụ, na-egwu ihe niile were were. Nke a bụ n'ezie ihe magburu onwe ngwa!
N'ihi na iOS
Ị pụrụ nanị ịwụnye a QuickTime ọkpụkpọ gam akporo na-enweta mgbe ahụ elu definition videos flawlessly. Ị nwere ike ewere ya dị ka a free MP4 ọkpụkpọ, Mp3 ọkpụkpọ! RealPlayer na-ahapụ gị chọọ videos online si YouTube, Bing na saịtị ndị ọzọ na-egwu ọ bụla video-amasị gị.
N'ihi na Android
MX ọkpụkpọ rite ya aha n'etiti gam akporo ọrụ. Ọ na-akwado na-ewu ewu codecs na video formats, gụnyere 3gp, avi, WMV, MKV, mp4, MPEG, MOV, wdg Ị pụrụ nanị egwu ọ bụla QuickTime video on Android ekwentị na a free ọkpụkpọ. Ọ a ghọtara dị ka ndị kasị mma na-eme-ya-ndị nile Movie Player N'ihi Android.
1. breeki aka
Breeki aka ike hazie kasị nkịtị multimedia faịlụ na ihe ọ bụla ma ọ bụ DVD BluRay na isi mmalite ndị adịghị nwere oyiri nchebe. Na wuru na-presets maka iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod, ị pụrụ nanị tọghata QuickTime video gị apple ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla mgbalị, na-egwu QuickTime on iPad, iPhone, ma ọ bụ Android ga mgbe kemgbe a nsogbu.
2. Wondershare video Ntụgharị Ultimate
Ọ atọghata videos na 30X ngwa ngwa ọsọ na ZERO àgwà ọnwụ. Dị nnọọ ịdọrọ gị video n'ime ya, chee iPhone ma ọ bụ iPad ma ọ bụ Android ngwaọrụ dị ka mmepụta usoro na kachasị presets, na mgbe ahụ na-amalite iji tọghata. Na ya vasatail ike, ọ na-ghọtara dị ka ndị kasị mma QuickTime maka iPad, iPhone ma ọ bụ Android Ntụgharị.
Ndị ọzọ Atụmatụ:
Dezie video: Kpaa, akuku, tinye sobtaitel ma ọ bụ mmetụta hazie video na a mfe ụzọ karịa iMovie ma ọ bụ Final Cut Pro.
Ọkụ DVD: Ọkụ ọ bụla video ka DVD na-enwe na gị DVD ọkpụkpọ.
Otutu atọrọ atọ: Nye presets maka iPhone, iPad, Android ngwaọrụ na dị iche iche.
Nyefee converted video site na WiFi n'etiti gị na kọmputa na ngwaọrụ.
Download N'ihi Mac Download N'ihi Windows
3. iSquint (Mac)
Achọ ihe dị mfe? Dị nnọọ na-iSquint ebe a dị ka gị QuickTime maka iPad ma ọ bụ iPhone Ntụgharị. Ọ rite ya ewu ewu na-akụzi ihe interface. Ị nwere ike dị nnọọ ịdọrọ gị faịlụ, na ịtọ gị mmepụta format, wee pịa amalite iji tọghata gị QuickTime video n'ihi na gị iOS ngwaọrụ.
A na ngwa bụ ihe ọzọ na QuickTime maka iPad, iPhone ma ọ bụ Android Ntụgharị. Ọ nwere ike tọghata ọ bụla QuickTime video gị iPhone, iPad ma ọ bụ Android ngwaọrụ. E wezụga na, ọ na-enyere aka gị video dị iche iche na nzacha. Ọ na-ebelata size gị video na ọdịyo na Lossless mkpakọ atụmatụ. The downside nke a ngwa bụ na echichi usoro na-ewe oge dị ukwuu.
Get More QuickTime converters >>
Ọzọ Isiokwu I nwere ike
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka mpg
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka FLV
Olee otú iji tọghata MKV ka QuickTime MOV
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka a DVD Player
Olee otú iji tọghata na Ọkụ MP4 ka DVD na Mac / Win
10 Free Ụzọ iji tọghata QuickTime MOV ka WMV / AVI / MP4 / FLV, wdg
10 Ike QuickTime Akụkụ na i nwere ike bụghị Mara
Free QuickTime Alternative: Play ọ bụla Video flawlessly
Olee otú igwu egwu QuickTime Video on iPad / iPhone / Android
3 Atụmatụ maka QuickTime Playlist i nwere mara
4 QuickTime na 'ọ dịghị ụda' ikpe
Alternative nke QuickTime MPEG-2 playback akụrụngwa
2 ụzọ na-esure QuickTime nkiri ka DVD
> Resource> QuickTime> Olee otú igwu egwu QuickTime Video on iPad / iPhone / Android